यस्तो छ कारण माझण्ड समूहले प्रचण्डलाई बनायो संसदीय दलको नेता – Khula kura
२१ फागुन, काठमाडाैँ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को माझण्ड समूहले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको साे समूहकाे संसदीय दलको बैठकले प्रचण्डलाई दलको नेतामा चयन गरेको हो ।
साे समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रचण्डलाई सर्वसम्मतरूपमा दलको नेता चयन गरिएको ट्वीटमार्फत जानकारी दिए । ‘हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा ) को संसदीय दलको बैठक आज सिंहदरबारमा बस्यो ।
दलको कुल सदस्य संख्याको बहुमत उपस्थित बैठकले पार्टीको सधारण सदस्यबाट समेत निष्कासित केपी ओली दल नेता स्वतः नरहेको निर्णय गर्दै क. पुष्पकमल दाहाललाई सर्वसम्मतिले दलको नेता चयन गरेको छ,’ श्रेष्ठले ट्विटरमा लेखेका छन् ।
सत्तारुढ नेकपाको संसदीय दलका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले संसद सचिवालयमा बिहीबार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तर्फबाट दर्ता भएको पत्र औचित्यहिन भएकाे बताएका छन् ।
शुक्रवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर भट्टराईले संसदीय दलको तर्फबाट दलको विधान बमोजिम विधितव रूपमा निर्वाचित संसदीय दलका नेता तथा पार्टीका प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रहेकाले अरु पत्र र दाबी गैरकानुनी रहेको दाबी गरेका छन् ।
बिहीबार प्रचण्डको पत्र माझण्ड समूहका सांसदहरूले सचिवालयमा दर्ता गरी ओली,उपेनता सुवास नेम्वाङ र सचेतक शान्ता चौधरीलाई कारबाही गरिएको जनाएका थिए ।
भट्टराईले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानूनबमोजिम बाहेक कोही कसैले कुनै गैर संवैधानिक र गैर कानुनी निर्णय गरिएको भनी गरेको पत्राचारको कुनै कानुनी आधार,औचित्य रप्रभाव हुन सक्दैन ।’
निर्वाचन आयोगले गत माघ ११ गते पार्टीको बैठकका मान्यता प्राप्त हुन अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले बैठक आह्वान गरेका हुनुपर्ने र पार्टीको आधिकारिक पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुनपर्ने उल्लेख भएकाले त्यसविपरीतका कुनै पनि बैठक र पत्राचारले मान्यता नपाउने समेत मुख्य सचेतक भट्टराईले बताएका छन् ।
हाम्रो शरीरका लागि सबैभन्दा फाइदाजनक जुस कुन हो ? खराब कुन हो ? थाहा पाउनुहोस्